श्रीमतीको उपचारमा भारत पुगेको प्रचण्ड मोदीको शरणमा ! - Nepal Aawaaj
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आफ्नो समूहका प्रथम अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जसरी भएपनि आफुलाई प्रधानमन्त्री बनाईदिन मोदीसँग गु’हार मागेको स्रोतको दा’बी छ । प्रचण्डले नेपालको अहिलेको अवस्थाबारे भारतीय पक्षसँग गोप्य सल्लाह गरेको बुझिएको छ । उनको त्यहाँ महाराष्ट्रका गभर्नर तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका नजिक मानिने भगत सिंह कोसीयारीसँग गोप्य भेट गरेको स्रोतको दाबी छ।
प्रचण्डले एउटा अन्तरवार्तामा अहिलेको परिस्थितिमा नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नका निम्ति भारतलाई आह्वान गरेको केही दिनमा नै उनको नयाँ दिल्ली हुँदै मुम्बईसम्मको यात्रा भयो, पत्नी सीता दाहालको उपचारको क्रममा। यो उपचारको लागि मात्र यात्रा हुन नसक्नेतर्फ संकेत गर्दै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले लेखेका थिए,‘प्रचण्डले पत्नी सीताको उपचारमा मात्रै ध्यान दिउन्।’ अर्थात् प्रचण्डको राजनीतिक भेट हुन सक्ने सुइँको पोखरेलले पाएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्ना पछिल्ला धारणामा सरकार अप्ठेरोमा पार्नका लागि चुच्चे नक्शादेखि जमिन फिर्ता ल्याउने मु’द्दा आफूले उठाएको कारण देखाउँदै, प्रचण्डलगायतको घेराबन्दीलाई उल्लेख गर्दै आएका छन्। के प्रचण्डले भारतलाई राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि निम्तो दिएका छन् त? उनको राजनीतिक पृष्ठभूमी र शान्ति प्रक्रियाको मुख्य विन्दु १२ बुँदे सम्झौतालाई हेर्दा भारत परिचालित रहेको स्पष्ट देखिन सक्ने कतिपयको भनाई छ।
पूर्वमाओवादी नेता तर अहिले ओली पक्षमा उभिएका मणि थापाले त आफ्नो मतमा सहमत नहुनेलाई प्रचण्डले जसरी पनि सिध्याउने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यहि क्रममा उनले त्यसबेला डा. बाबुराम भट्टराईलाई पुर्नका लागि खाल्डो खनेको तर आफूहरूले रोकेको पनि बताइसकेका छन्। के, प्रचण्डले ओलीको राजनीतिक जीवन र अभ्यास समाप्त पार्ने रणनीति बनाउँदैछन्? यो विषयमा स्पष्ट खुलासा भने भइसकेको छैन।प्रचण्डले नेपालको अहिलेको अवस्थाबारे भारतीय पक्षसँग गोप्य सल्लाह गर्ने भएका छन्। प्रतिनिधि सभा वि’घटनपछि उत्पन्न भएको मुलुकको अवस्थामा भारतीय पक्षको हस्तक्षेपकारी भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिएका उनले ओलीको अहिलेको कमदलाई सच्याउनका लागि दबाब दिन भन्नेछन्। पत्नी सीताको उपचारमा छोरीहरूलाई खटाएर उनी राजनीतिक लविङका लागि सक्रिय हुने बताइन्छ।
उनको त्यहाँ महाराष्ट्रका गभर्नर तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका नजिक मानिने भगत सिंह कोसीयारीसँग भेट हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ। कोसीयारी नेपाल मामिलाका जानकार पनि मानिन्छन्। गभर्नर हुनुअघि भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष रहेका कोसीयारीसँग प्रचण्डको बेलामौका कुराकानी हुने गरेको थियो भने सम्बन्ध पनि बलियो रहेको छ। कतिपयले भने भारतीय जनता पार्टीका प्रदेशस्तरका नेतासँग पनि उनको भेट हुने अनुमान गरेका छन्। यो समाचार हाम्रो इकोनोमिबाट साभार गरिएको हो ।
महिला बोल्ड र सफल हुनका लागि पहिलो कुरा आफ्नो क्षमता बुझ्न जरुरी हुन्छ । पढेको वा नपढेको जस्तोसुकै महिला किन नहोस्, आफ्नो क्षमताको पहिचान गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ । जसले जस्तोसुकै काम रोजे पनि ऊभित्र उत्साह हुन जरुरी छ । सँगसँगै बलियो विलपावर पनि चाहिन्छ । त्यही विलपावरले नै महिलाको लक्ष्य निर्धारण गर्छ । विलनेसले नै लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि भूमिका खेल्छ।
-नेपाली समाजमा महिलाको गतिविधिलाई निर्धारण गरिएको छ । संस्कारले बाँधेको छ, कुनै बन्द भाँडामा राखेको सामग्रीजस्तो । तर, कोही महिला अगाडि बढ्न चाहन्छ र कुनै क्षेत्रमा केही योगदान गर्न खोजिरहेको छ भने ऊसँग कन्भिन्सिङ पावर चाहिन्छ । कुनै महिलाले घरका दिवार फोड्नुपर्छ, झगडा गर्नुपर्छ भन्ने होइन । घरका मानिसलाई पनि कन्भिन्स गरेर आफ्नो लक्ष्यप्राप्तिका लागि अगाडि बढ्नुपर्दछ। -मानिसले महिलालाई ठाउँ दिने विषयमा सबैभन्दा पहिला पाइन्ट र फ्रकभन्दा पनि उसको क्षमता हेर्नुपर्दछ । महिलालाई अहिले पनि विभिन्न कुरामा डोमिनेट गरिएको हुन्छ । त्यो विषयमा ध्यान नदिएर आफ्नो क्षमताप्रति पूर्ण विश्वास हुन जरुरी हुन्छ।